Kulanka 3aad ee Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo markii 3aad baaqday – Kalfadhi
Waxaa markii 3aad baaqday Kulamada Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle oo dhawaan u furmay Kalfadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada kadib markii ay ka soo laabtayn fasax ay ku jireen wax ku badan 2 bil. Maalmihii la soo dhaafay ayaan jirin wax kulan ah ay isugu yimaadeyn Xildhibaanada lamana oga sababta ka dambeysa.
Golaha Wakiilada Hirshabeelle ayaa Todobaadkii kulmo 3 jeer sida ku cad Jadwalkooda, maalmaha Sabtida, Isniinta iyo Arbacada ayey Xildhibaanada isugu yimaadaaan kulamadooda balse waxaa Shir ugu dambesay Isniintii Todobaadkii hore oo ku beegan 4ta bishaan Febaraayo ee sanadka 2019.
Dhowr Xildhibaan oo katirsan Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle oo la hadlay Kalfadhi ayaa xaqiijiyay in aysan jirin kulamo ay yeesheen maalmihii ugu dambeeyay, waxa ay sheegeyn in kulankoodii ugu dambeeyay oo ahaa Kulanka 2aad ee Kalfadhiga 5aad in uu dhacay 4tii February 2019. Xubnahaan ayaa sheegay in lagu wargeliyay in ay baaqdayn Shirarkii ay lahaayeen balse aan loo sheegin sababta.
Qaar kale oo katirsan Golaha Wakiilada Hirshabeelle ayaa Kalfadhi u sheegay in baaqashada Kulamada Baarlamaanka ay sabab u tahay curyaamin uu ku sameeyay Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Xildhibaan Maxamuud Cabdulle Batalaale ayaa sheegay in xaruntii Baarlamaanka ay la wareegeyn Ciidamo wixii markaas ka dambeeyayna aysan jirin fadhi ay Baarlamaanka yeesheeyn.
“Xildhibaanada 50 kamid ah waxaa laga dhigay Wasiiro, kuwa kalane waxaa lagala balamay in aysan fadhiyada soo xaadirin, waxaana ka dambeeya Madaxweynaha Hirshabeelle” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Batalaale.
“Ciidamo ka amar qaata Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa la wareegay Xarunta Baarlamaanka, waa loo diiday Xildhibaanada walina xal lagama gaarin” ayuu yiri Xildhibaan Maxamuud Cabdullle oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
Tan iyo markii uu furmay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle waxaa jiray Khilaaf xoog leh oo u dhaxeeyay Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, Kulamadii ugu dambeeyay waxay kaga hadleen musuq maasuq ay sheegeyn inuu ka jira Hey’adaha Hirshabeelle gaar ahaan Xafiisyada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka.
Madaxweyne Waare ayaa sameeyay isbadal Golahiisa Wasiirada ah waxa uuna Wasiiro u magacaabay ku dhawaad 55 Xubnood oo katirsan Golaha Wakiilada Hirshabeelle. Dad badan ayaa u arka Xildhibaanada Wasiirada laga dhigay in Madaxweyne uu isaga difaaca Mooshinka iyo weerarada kale ee uu kala kulmayo Xildhibaanada Hirshabeelle.
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka oo dib uga shaqeynaya 4 cutub oo ka tirsan dastuurka